Home Wararka Cumar Finish Duqii ugu Xumaa ee ay Taariikhda Xamar Abid Yeelato
Cumar Finish Duqii ugu Xumaa ee ay Taariikhda Xamar Abid Yeelato
Duqa Muqdisho, gudoomiyaha Gobolka Banadir, Cumar Finish ayaa waxaa la hadlay dad ay dhibtay nolosha adag ee reer Muqdisho, hasa yeeshee waxay kala kulmeen ceeb iyo wejigabax. Cumar oo beryahaan wajacsanaa sida uu u sheegay dadkii la kulmay ayaa ku yiri “ Horta mid ogaada Roobka aniga ma keenin ee Naxariis Xag Allah nooga timid ciddii uu wax ka halleeyey iyada sameysato, dadka ka cabaadaayo guryaan naga dumay taas ma og yihiin, tan kale dadka dowladda hoose maa guryahooda u nadiifiheysa, iyagaa laga rabaa jidadkooda iyo guryahooda inay nadiifsadaan”.
Runtii waa liidnimo aad u hooseysa inuu duqii magaalada uu heerkaas ka jooga mas’uuliyad uu mid isaga ka liita uu u dhiibay. Inta badan magaalada ayaa kala go’an meelna waxaa goostay Fahad iyo Farmajo oo cabsanaya meelihii looga leexan jiray ama la ga soo wareegi jirayna waxaa googey daadad iyo hogag ka qodmay.
Umulaha oo jidka ku dhala, caruurta oo godad ku dhaca, wayeelka oo cabsi darted guriga aan soo bixin Karin iyo meydka oo jiira dheer la soo geliyo iyadoo garbaha lagu sido waxay farxad iyo rayrayn u yihiin Farmajo iyo Fahad oo qaba waa in dadka Muqdisho laga adkaadaa oo dhinac walba laga curyaamiyaa, si ilmahooda aay uga haraan dalka intiisa kale, iyagana u xoolo beelaan.
Ujeedooyinkaas gurracan ee xanuunka badan waxaa loo adeegsadaa doqommo dhuuniraacyo ah oo aan fahameyn cawaaqibka ay dadkiisa ku reebeyso barnaamijkaan lugooyo ee uu fulinayo waxaana ka mid Cumar Finish, Saabey iyo kuwo kale oo badan oo lagu adeegto.
Muqdishu dhaqaalaha laga guro waxaa hub iyo saanad loogu diraa in umado nadab ku deggan lagu barakiciyo sida walaalaha reer Gadoodka ah, Walaalaha reer Hiiraan, Cumar Finish oo guryo ilaa seddex ah kaga iibsado Turkiga iyo Fahad oo kula tamshleeya Xamar oo gabdhaha hadba tii qurux ku afduubta, kuna haysta si aan cabsi lahayn. Waa yaabe sidee ku dhici kartaa inay magalada nabad tahay iyadoo gabar Somaliyeed afduub cad oo aan qarsaneyn loogu haysto, sow dhaqan guur iyo diin la’aan dayuusnimo weheshan maaha?
Sidoo kale, waxaa guulweyn joogi lahaa Alshabaab haddii ay dhinacooda dadka cadaawa cunka iyo dhibaateynta ka dhaafi lahaayeen waayo dadku waa masaakiin u nugul ciddii u naxdaa laakiin marka Tinaarka iyo dabka ay u dhaxeeyaan ma yaqaanaan wax ay sameeyaan inay rabbi gacmaha u taagtaan maahee.
Cumar Finish waxaa uu goostay inuu Muqdisho finish a dhigo dhaqaale ahaa, iyo bilic ahaanba waana ku joogaa jidkaas oo xaalku waa finish iyo bohola foorara, waxayna sugeysaa inuu rabbi u keena mid ka bixiya xaaladdaan adag.
Farmajo iyo Rooble midkoodna ma rabo in nolosha Xamar ay wanaagsanaato haddii kale sidaan kuma daawadeen, waayo waxaanan muuqan waxa u dhiman ee uu Cumar Finish halleyn karo oo keeni kara xil ka qaadistiisa. Shaashadda hortaalla ayaa ku filan inay go’aan ku qaataan haddii ay beer naxa leeyihiin, halkaan ayey ku taxan yihiin sawiradda argagaxa leh ee Xamar ay maanta ku sugan tahay.
Ogow hogaamiyaha wanaagsan waa kan dadkiisa la qeybsada dhibaatada cid kasta oo u geysatayna ka gooya. Laga yaabe inay kula khaldaneyd markii uu lahaa Bush-kii yaraa “ Ama waad nala jirtaa ama waad naga soo hortjeeddaa markii la qarxiyey daarihii mataanaha ee Ney Yorka”. Marka Rooble iyo Farmajow waad naga soo horjeeddaan oo waa noo cadahay, rabbisa ha na kii dhaafsho wax idin dhaama ha noogu kiin badalo.
Dhinaca kale, weli ma is weydiiseen sababta uu Cumar finish ama Rooble hal eray uga oran waayeen maqnaanta gabar ka mid ahayd shaqaalaha gobolka Banaadir oo ay NISA afduubatay suuragalna ay tahay in meel lagu haysto oo sidii la rabo looga muraad yeesho ama si araxndarro iyo xanuun ah nafta looga gooyey oo kabaheedii lagula xabaalay meel aan calaamad lahayn si aan loo garan. Waa Ikran Dr Tahliil oo ka tirsaneyd shaqaalihii soo dhisay xafiika guddoomiyaha gobolka Banadir, kana soo shaqeysay kursiga dhiigga leh ee ku fadhiyo Cumar Finish.
Cumar Waxay ahayd inuu sameeyo:
Inuu baaris rasmi ah ku sameeyo dilkii loo geystay ninka uu kursiga ka dhaxlay ee Eng. Yarisow iyo sidii ay wax u dhaceen haddii uusan ka mid hayn kuwa wax o gee qaba inaan baaris loo baahneyn, ama uusanba isaga qeyb ka ahayn wixii ku dhacay duqii isaga ka horrreeyey.
Waxay inuu Baaris iyo dabagal ku sameeyo Ikran oo laba jeer xaq ugu leh, kuwaas oo kala ah a) Inay ahayd shaqaale Gobolka soo maray kana shaqeysay xelli adag, una soo joogtay dilkii Eng. Yariisow taas oo u muuqata inay tahay waxa ay sababsatay iyo b) Iyadoo ah muwadin deggen Xamar oo uu isaga duqeeda yahay masuuliyadna ka saaran tahay dhamaan shacbiga ku hoos nool.
Hasa yeeshee, Gudoomiye Finish marnaba kama hawlgalin dhibaatada labadaan qof iyo guud ahaan dhibaatada magaalada iyo shacbiga Xamar haysata, wuxuuna u muuqdaa ruux aan garan Karin inay saaran tahay mas’uuliyad uu berri rabbi la hortagi doono. Muqdisho weli ma helin ruux u dhashay, ku dhasahy, kuna koray oo ay dhibteeda dhibeyso waxaan rajeyneynaa in maalin ay heli doonto ruuxa ay mudan tahay oo seddexdaan astaamood kulansaday.